Fitaovana plastika fotsy fotsy PE PE Green Green 8x3x2m tranofiara sy trano maitso | Winsom
10-29 Taratasy 30-49 Taratasy
> = 50 Taratasy
Ity tranom-pokontany ity dia feno rakotra mihidy feno, afaka mamorona tontolo avo kokoa sy hamandoana avo kokoa, izay afaka manampy anao hamboly zavamaniry marobe kokoa.
2) Ny fonony dia mampiasa fitaovana polyethylene manjelatra mavesatra izay miaro UV ary 100% ny rano.
3) varavarana Zippered ho an'ny fidirana an-tongotra ao anaty trano fandehanana an-trano.
Laharana modely WS-GH832
Anaran'ny entana Fitaovana plastika fotsy fotsy PE PE 8x3x2m
Haben'ny vokatra 26x10x7ft (8x3x2m)
Fonony fitaovana 140 bolongara PE fotsy
Spigrafaly. Dia fantsona vy 25/19 * 0.8mm
Ity tranom-pokontany ity dia manitatra ny fitomboan'ny taonanao amin'ny alàlan'ny fiarovana ny taona, ny perennials, ny zana-ketsa, ny legioma sy ny zavamaniry maloto amin'ny hatsiaka. Mampiasa ny famolavolana tonelina ny tranon-tranonay mba hanomezana azy sy manome aina sy hikolokoloana zavamaniry be dia be.
Ny tranom-pokontany dia nanenjana ny firafitry ny vy matevina sy ny tady amin'ny tany matanjaka ary ny tsatokazo amin'ny tany. Misy fitaovana vita amin'ny fantsom-bazaha 4, ary ny fantsona fanamafisana antonony ho an'ny fitomboana.
Ny sary feno amin'ny antsipiriany kokoa dia hanome anao fahalalana feno ny vokatra momba anay. Ny fonon'ny overlong manodidina ny maintso dia mahatonga ny habakabaky ny zaridaina ary azo antoka, hanodinana azy amin'ny tany, na mampiasa biriky, kitapo na kilaoty hafa manodidina ny hatsaratsara.
Nohavaozina ny fonony matevina misy sosona 2 sosona miaraka amin'ny fanamafisana voaforona ao anatiny, miaro ny zavamaniry amin'ny orana, ny masoandro ary ny sarony mangarahara mamela ny 85% ny masoandro mamirapiratra eny an-trano. Ny famolavolana ambaratonga lava dia manome fanidiana tsara kokoa sy ny hafanana ho an'ny zavamaniry. Ampifamadiho ny zavamaniry rehetra ao amin'ny faritra tokana sy arovana izay manampy anao hitombo sy hitantana zavamaniry isan-taona sy ny voankazo, legioma, voninkazo avy amin'ireo singa masiaka.
Rindrina misy tampon-trano misy tsipika roa sy 12 fantsona 12 dia natao ho an'ny fiparitahan-drà sy hivoahana amin'ny andro mafana. Ny fonony feno mihidy dia mitazona ny habetsaky ny hamandoana avo ho an'ny zavamaniry tropikaly, legioma, zavamaniry misy zavamaniry ary ahitra.
Previous: Fivarotana entana mivarotra any ivelany ho an'ny antoko
Manaraka: Tranitra Ho an'ireo hetsika ivelan'ny entana mivarotra 6x12m
Trano maitso plastika